HomeTURKEYGobolka Banaadir81 Duzce TurkeyTareenka Tram Tareenka oo Markii Ugu Horaysay Lagu Dilay Duzce Istanbul Street
Tareenka Tram Tareenka oo Markii Ugu Horaysay Lagu Dilay Duzce Istanbul Street
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 81 Duzce Turkey, tareenka, GUUD, Gobolka Banaadir, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY, taraamka 0
Gawaarida taraamyada waxaa lagu soo bandhigi doonaa wadada ugu horeysa ee wadooyinka istanbul
Duqa magaalada Düzce, oo mashruuc ka diyaariyay Istanbul Street. Faruk Özlü, wuxuu riixay badhanka hirgelinta mashruuca cusub. Mashruuca cusub ee saddexda haad ee waddada ayaa marka hore ka saari doona biraha taraamyada. Tan darteed, wadada ayaa loo xiri doonaa taraafikada laga bilaabo 8: 22: 00 illaa 10: 00: 00:
65. Wasiirka Sayniska, Teknolojiyada Warshadaha iyo Duqa Magaalada Düzce Faruk Özlü wuxuu riixay batoonka hirgelinta mashruuca loo diyaariyay İstanbul Street.
Dowladda Hoose ee Duzce waxay bilaabeysaa inay ka shaqeyso mashruucan cusub ee laga hirgalin doono Istanbul Street. Biraha taraamyada ayaa marka hore la qaadayaa si loo hirgaliyo mashruucan cusub, oo ay ku jiraan taraafikada gawaarida, lugeeyayaasha iyo isticmaaleyaasha baaskiilka wadada. Ku shaqeynta arrinta ficil dhab ah ee degmada Düzce, Xafiiska Düzce ee Xafiiska Taliyaha Booliska ee Waaxda Gaadiidka waaxda ayaa qoray.
Biraha taraamyada ayaa marka hore la ridi doonaa si loo hirgaliyo mashruuca cusub ee saddexda haad ee wadada. Waxaa lagu qoray warqadda rasmiga ah ee ku saabsan shaqada loo qabanayo jidkii baaskiilka ee loo qorsheeyay in lagu sameeyo bidixda jihada socodka qulqulka, bayaanada soo socda ayaa lasiiyay: "Maadaama wadada loo habeyn doono iyo shaqada asphalt ee Düzce Merkez, Wadada İstanbul Street ee degmada, wadada waxay ka bilaabaneysaa 08 / 10 / 2019 taariikhda iyo waqtiga 22: 00. 10 / 10 / 2019 taariikhda iyo waqtiga 00: Waxaan codsaneynaa in la xiro illaa 00 (09 / 10 / 2019 / xirnaa maalinta oo dhan Arbacada oo loo furo taraafikada habeenkii 00: 00). "
Dowlada hoose ee Düzce ayaa sheegtay in shaqada wadada ay soo gabagabeyn doonto inta u dhaxaysa taariikhaha lagu qeexay qodobka, iyagoo u mahadceliyay muwaadiniinta sida xasaasiga ah u shaqeeyay mudadii ay shaqeynayeen.
Dhiigga Dariqadda Istarliinka ee Istanbul 04 / 08 / 2017 Wadada marayaya Street ee Beyoglu, Project Istanbul, curdan taraamka nostalgic afuufi doonaa hawada la sameeyay caanka Istiklal Caddesi. Qiimaha taraamka ee degmada ayaa noqon doona 1 million 700 kun TL. Duqa Düzce Mehmet Keles, mid ka mid ah shaqada mashruuca ardayga la doonayo in la pedestrianized waddooyinka ee Istanbul. Waddada waxaa loo qorsheeyay in loo badalo xarunta dukaameysiga furan. laakiin riyada ah badhasaab ka sano ku dhowaad 20 go'aan daabdeedna si ay u hirgeliyaan Mashruuca Duqa Duzce Mehmet Keles, 'Jubilee aan la leh doonaa' jidka 4 xiray in gaadiidka ee July. ...
25 kun oo ton oo asfalt ah ayaa lagu daadin doonaa waddooyinka Bornova 23 / 02 / 2015 25 kun ton oo asfalt ah ayaa lagu daadin doonaa waddooyinka Bornova: Degmada Bornova ayaa tallaabo qaadday in ay cusboonaysiiso waddooyinka degmada. waddooyinka xumaatay bilaabay diyaarinta ay 20 kun oo tan oo laami kulul curdan xaareysa in la cusboonaysiiyo wadada degmada 15 kilomitir dheer madax ilaa lugo ah la cimilada diiran u cusbooneysiin doonin. 5 kun ton oo hindise gaar ah leh jajabyo ayaa lagu samayn doonaa meelo kala duwan. Goobaha ayaa gaaraya 4. Degmada Bornova, 25 kun tan oo asfalt la leh daraasad gaar ah ayaa go'aamin doona waddooyinka ay isticmaalaan. Marka laga soo tago go'aaminta ay sameeyeen kooxaha degmooyinka, dalabaadka muwaadiniinta iyo dalabaadka kufsiga ayaa la tixgelin doonaa. Mukhtar ayaa looga baahan yahay maadada ...
Dukcade, Istanbul Caddesi waxaa loo wareejin doonaa nidaamka tareenka 19 / 07 / 2012 Duqa Duur Daahir Ismaaciil Bayram, Istanbul Street ka dib markii la xiray gaadiidka tareenka, ayaa sheegay in kala-guurka. Waxaannu dooneynaa inaan tallaabo tallaabo qaadno, ayuu yiri Bayram. Ismaciil Bayram wuxuu qiimeeyay shaqada ku saabsan xiritaanka Istuudiyaha Street iyadoo la adeegsanayo mamnuucidda baarkinka. Guddoomiyuhu wuxuu sheegay in mashruucan uu yahay in la xiro waddada gawaarida oo lagu rakibo nidaamka tareenka. Si aan u gaarno qodobkan waxaan dhignay inaanu aadi doonno marxaladda wareegga. Waxaan codsanay xayiraad baabuur. Hadda waxaan samaynaynaa diyaarinta saxda ah ee codsi xarig ah. Dabcan, dhammaantood waxay u baahan yihiin maalgelin cusub. Barashada mustaqbalka ee daraasadaha nidaamka tareenka. Qorshahani waa mid caafimaad qaba O
Duzce Istanbul Street waxay furantahay gaadiidka gaadiidka 04 / 12 / 2018 Qiyaastii 1.5 sano ka hor 'Mashruuca Laanta Socodka' waxaa lagu xidhay gaadiidka isgaadhsiinta ee Istanbul Street ku yaala marinka dambe. Dursun Ay, Duqa Daarus, oo aan ka helnay macluumaad ku saabsan telefoonka mawduuca, ayaa ku dhawaaqay in waddada dib loogu celiyay go'aanka Guddiga Wadajirka ee Gaadiidka. Waxa uu carrabka ku adkeeyay in ay jirto saameyn ah baahida aadka u daran ee ka imaanaysa dadweynaha si ay u socdaan. Horumarka la filayo bilaha ayaa noqday mid rasmi ah oo go'aanka ah "Guddiga Gaadiidka Gobollada". Istanbul Street, oo loo furay taraafikada muddo bilooyin ah, ayaa loo furay baabuurta. LAMBARIDDA DHALINYARADA Dursun Ay, Duqa Dastuurka oo aan ka helnay macluumaad ku saabsan telefoonka D
Wadada Baaskiil ee Lagu Dhisi doono Ka Bixinta Wadooyinka Tareenka Magaalada Düzce 07 / 08 / 2019 Degmada Düzce, Istanbul Street waxay sameysay bayaan ku saabsan mashruuca loo diyaariyay. Markaa, aayaha mudada dheer ee jidku way cadaatay. Baaxadda mashruucan dhexdeeda, daraasad ayaa la samayn doonaa si loogu dhiirrigeliyo isticmaalka baaskiillada halkii laga kaxeyn lahaa bartamaha magaalada. Wasiirka Sayniska, Warshadaha, Teknolojiyadda iyo Duqa Magaalada Düzce Maalintii ugu horreysay ee magacaabistiisa, Faruk Özlü wuxuu meel mariyey tallaabooyinka asluubta maaliyadda wuxuuna mudnaanta koowaad siiyay habeynta miisaaniyadda. Intii lagu jiray muddadii doorashada, Madaxweyne Özlü, oo gacmihiisa u saaray mashaariicda badan ee uu ka hadlay, wuxuu riixay furaha dib-u-habeynta Waddada Istanbul ee ku taal bartamaha magaalada. Duqa magaalada Özlü, oo si joogto ah ula tashanayay ganacsatada gobolka, muwaaddiniinta iyo wakiillada NGO-yada, ayaa yidhi,
Dalxiisayaasha reer Ukraine Admire Kayseri
Dhiigga Dariqadda Istarliinka ee Istanbul
25 kun oo ton oo asfalt ah ayaa lagu daadin doonaa waddooyinka Bornova
Dukcade, Istanbul Caddesi waxaa loo wareejin doonaa nidaamka tareenka
Duzce Istanbul Street waxay furantahay gaadiidka gaadiidka
Wadada Baaskiil ee Lagu Dhisi doono Ka Bixinta Wadooyinka Tareenka Magaalada Düzce
Duzce Istiklal Street ayaa ku duuli doona hawada
Khadka Tramway ee Boosaaso waxaa loo kordhin doonaa Boggaga Tayyareci Mehmet Cali iyo wadada Selçukbey Street
"Cagaaran" Ground to Trost Tram Street on Istiklal Street
Tram Enthusiasm ee Baasaboorka ... Tilmaamaha Talaabada Koowaad ee Gawaarida waddooyinka ee waddada Cumhuriyet
Gaadiidka Isticmaalka Tareenka Isticmaalka Tareenka ee Istanbul